Iilogo zamaqela: iimpawu zeempawu zezemidlalo kunye nemizekelo | Abadali be-Intanethi
Umthombo: Sports Inc
Imidlalo lelinye lamacandelo athe alungiswa ngokuyilwa kwemizobo. Uninzi lwabayili kunye nabayili kuye kwafuneka bakhethe ukuyila okanye ukuyilwa ngokutsha okuya kuhambelana nemibala kunye namaxabiso eklabhu nganye. Xa siyila ilogo ethile, siyila into eya kuba yimpembelelo yaloo nkampani okanye, kule meko, iklabhu yezemidlalo okanye iqela.
Kule posi siza kukubonisa eyona mizekelo ibalaseleyo yeelogo, uninzi lwazo zingamaqela ebhola ekhatywayo okanye ebhola yomnyazi, nokuba loluphi uhlobo lomdlalo ekuthethwa ngawo, bashiye uphawu kuyo yonke imbali. Yintoni egqithisile, Siza kukunika iingcebiso zokuyila ilogo yakho yokuqala kwaye zeziphi izikhokelo okanye izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo kuphuhliso lwaso.
Zilungiselele la mava amaninzi ezemidlalo.
1 Iimpawu zelogo yezemidlalo
1.2 Iimpawu zentsulungeko
1.3 isilogeni okanye umyalezo
2 Imizekelo yeelogo
3 Izixhobo zokuyila ilogo yakho
3.4 Isihlwele Brand
Iimpawu zelogo yezemidlalo
Ukuze ukwazi ukuyila ilogo yezemidlalo, kuyimfuneko ukuba sikubonise uluhlu lweempawu eziza kusebenza njengesiseko sokuqala ukuqalisa. Yiyo loo nto kufuneka uhlawule ingqwalasela kwaye uthathe lo msonto omncinci njengesalathiso soyilo lwakho.
Xa sithetha ngobuni, sithetha ngale mibuzo mine: yintoni, injani, yeyantoni kwaye yenzelwe bani. Kukho imibuzo emine esisiseko sokuqonda ukuba kutheni siyila ilogo. Ukuba siyila iqela elithile lezemidlalo, kufuneka sicinge ngendlela esifuna basibone ngayo abalandeli, iklabhu ezimiseleyo okanye ephucukileyo okanye iklabhu edlamkileyo enomlinganiswa othile.
Mhlawumbi kwinkqubo yokudala i-brand, imibala eya kusetyenziswa ayithathelwa ingqalelo okokuqala, kuba inkampani inokutshintsha imibala nangaliphi na ixesha kwaye iphinde ihlaziye, kodwa kwikhaka okanye kwi-logo imibala ihlala igcina. , kwaye yenye yezinto eziphambili ekufuneka zithathelwe ingqalelo.
Amanani yenye yezinto eziphambili ekufuneka uzithathele ingqalelo, yimpendulo yombuzo wokuba ufuna abalandeli bakho balibone njani iqela lakho kwaye baliqonde. Xa sithetha ngeenqobo ezisemgangathweni, sithetha ngothotho lwemiba engabonakaliyo ephazamisana nethi inxibelelane nathi malunga neklabhu okanye iqela. Umzekelo, ukuba sijonga ilogo yeqela lebhola ekhatywayo laseParis (PSG), Ineenqobo apho iikhonsepthi ezininzi ezinje ngobuhle, ubunzulu kunye namandla ezoqoqosho zichazwa.
isilogeni okanye umyalezo
Oku kunokubonakala kufana nephulo lentengiso, kodwa kwikhaka okanye uyilo lwelogo kufuneka kubekho uphawu oluncinci, nokuba lungaphakathi okanye njengento yesibini kuyo nayiphi na into efakiweyo. Isilogeni luphawu lweklabhu kunye nokuba abalandeli bakho baya kuqaphela ntoni iqela njengoko liyiyo.
Isilogeni kufuneka sibe mfutshane, sibe mfutshane ngokwaneleyo ukuze sichaze into ofuna ukuyithetha kwaye ukwenze ngamagama amathathu okanye amane ubukhulu becala. Lelinye lawona macandelo anzima kakhulu, kuba yeyona ikhumbulekayo.
Kweli candelo leposi, siza kukubonisa imizekelo yamaqela ahlukeneyo, amanye kuye kwafuneka adlule kuthotho lohlengahlengiso ukuze ilogo ilingane nexesha elithile. Oko kukuthi, ukuhlaziya imiba ethile okanye iinkcukacha zengubo yengalo kwaye ziguqule zibe zizinto zangoku kunye nezangoku.
ILiverpool liqela lebhola ekhatywayo elikwiligi yebhola ekhatywayo yesiNgesi, iPremier League. Liqela elineminyaka engaphezu kwama-30 yembali, ukusukela oko lathweswa isithsaba setumente ye-European Champions League izihlandlo ezithandathu.
I-logo ibonakaliswe kakhulu ngumbala wayo obomvu, umbala ongakhange unike ubuntu kuphela kwikhaka kodwa ukwangumfuziselo weqela xa uzichaza iiBomvu. Uphawu lubonisa intaka eyaziwa ngokuba yiNyoni Yesibindi, into eyinkwenkwezi efihla intsingiselo yezentlalo nezopolitiko. Ikwakhatshwa sisilogeni esincinci Awusoze uhambe wedwa (awusoze uhambe wedwa), isilogeni esiphuma kubalandeli abafanayo beli qela nabamkela iqela labo.
Sele zihlaziywe kahlanu eli khaka lenziweyo ukuze kufunyanwe eli langoku, kwaye akulindelekanga nanjengoko belenza elinye lamaqela abalulekileyo kwimbali yebhola ekhatywayo, ingakumbi eNgilane.
IManchester City yenye yeeklabhu zePremier League kwaye yenye yezona zibalulekileyo eYurophu. Yimbangi yeManchester United edumileyo kwaye ngaphandle kokwabelana phantse ngesixeko esinye, bagqamile kuyilo lwabo.
Le klabhu kuye kwafuneka ihlaziye ikhaka layo ukuya kuthi ga kwizihlandlo ezisibhozo, ngo-2016 yayilixesha lokugqibela ihlaziywa. Ngokungafaniyo neLiverpool, IManchester City igcina imibala yayo eluhlaza okwesibhakabhaka ngokwesitayile. I-logo yangoku ibonakaliswe ngokuqulatha ikhaka eliqhelekileyo le-90s kodwa elinesitayile sangoku ngakumbi. Iqulethe izinto ezibalulekileyo zeklabhu ezifana ne-clipper yegolide kunye ne-rose ebomvu eyaziwayo.
Ukuthiywa kweqela kunye nomqondiso, basebenzise i-sans-serif typeface enika inkangeleko yangoku, ecocekileyo nekhuselekileyo kwaye ekwanika ikhaka bonke ubuntu. Ngokufutshane, ukumila kwayo okusetyhula okutsha kuye kwaba lelinye lamakhaka adumileyo kuzo zonke iiligi zaseYurophu, eNgilani nakwamanye amazwe.
Umthombo: Wallpaper Safari
ILakers liqela lebhola yomnyazi elikwi-American Basketball League edumileyo (NBA). Liqela elivela eLos Angeles kwaye ukuza kuthi ga ngoku, iye yaba lelinye lawona maqela abalaseleyo e-basketball emhlabeni. Ayaziwa nje ngokuba yintshatsheli ukuya kuthi ga kwi-16 amaxesha alandelelanayo, kodwa nangoyilo lwelogo yakhe.
Umbala ngokungathandabuzekiyo uchazwa ngeso lenyama, ngumbala omfusa odumileyo. Ukongeza, basebenzise umfuziselo odibanisa lonke uluntu lwebhasikithi Lakers. Ilogo iqulethe izinto ezibalulekileyo ezinje ngebasketball ngaphambili kunye nombala wegolide.
Izixhobo zokuyila ilogo yakho
Ukuba bekufuneka sikhethe phakathi kwezinye izixhobo ezininzi, oku ngokungathandabuzekiyo sisixhobo seenkwenkwezi kwaye sibekwe kwi-10 ephezulu. I-Illustrator sisicelo se-Adobe, ngokukwazi ukusebenza nge-vectors, ivumela ukuba kwenzeke iilogos. .
Akhawunti ngesixhobo se bar eya kukunceda ekudaleni uyilo lwakho kwaye ukwanazo iiprofayili zemibala eyahlukileyo ukuze uzenzele ngokuthanda kwakho. Ngaphandle kwamathandabuzo yiyo yonke into oyifunayo ukuze uqalise.
Ukuba awukayazi ukuba ungaqala ngaphi kwaye ufuna inkqubo yokukunceda kwaye ikunike ukomelela, iCanva sisixhobo sakho esifanelekileyo. Le nkqubo inethuba lokuba neetemplates ezinokwenziwa ngokwezifiso apho ungaqala khona ukuyila ngokuthanda kwakho.
Into embi malunga ne-canva kukuba zizifanekiso ezinokusetyenziswa ngumntu wonke kwaye uyilo lwakho lungaphinda-phindwa kwiimpawu zangaphambili esele ziyilwe, ngoko ke unyawo luyalahleka. Kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, lukhetho oluhle ukuba into oyifunayo sisixhobo sasimahla esiya kukunceda ekuqaleni kwakho.
I-Adobe Spark sesinye sezixhobo eziyinxalenye ye-Adobe. Mhlawumbi ekuqaleni kunokubonakala kungenakwenzeka ukuyila uphawu apha, ngakumbi ukuba sele ungumyili kwaye usebenza kuphela ngeenkqubo ezifana ne-Illustrator. Kodwa nge-Spark, kuyenzeka ukuba wenze iigrafu ngokukhawuleza kwaye unethuba elibanzi lokuba zinokwabelwana ngazo kwiinethiwekhi zentlalo.
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye inemifanekiso, iifonti kunye nemibala ukuqala ukwenza uyilo lwakho lokuqala. Ngaphandle kwamathandabuzo sisixhobo, njengeCanva, siya kukunceda kumanyathelo akho okuqala.
Isihlwele seBrand sisixhobo esisebenza njengomhleli we-intanethi. Akukhona nje ukuba kulula kakhulu ukuyisebenzisa, kodwa ikwanoluhlu olubanzi lweelogo zasimahla ezisele ziyilwe kwaye zinesiseko sangaphambili kunye nezinye ezifuna iindleko kodwa zinobuchule obungaphezulu.
Ngumhleli ukuba, kuxhomekeke kwinto oyithandayo, Ineendleko zenyanga ngenyanga kodwa uya kuba nofikelelo ekubeni ukwazi ukukhuphela uphawu lwakho kuyo nayiphi na ifomati, kwaye uya kukwazi kwakhona ukusebenza nge vectors, ngokungathi usebenza Illustrator.
Ngaphandle kwamathandabuzo ngomnye wabahleli ababalaseleyo.
Ukuyila ilogo yezemidlalo kufuna isigaba sokuqala sophando kunye nokucebisana ngengqondo ukuyinika imilo ofuna ukuyinika kuphela. Yiyo loo nto ilogo okanye ikhaka ngalinye linemilo kunye neempawu ezithile.
Siyathemba ukuba unokukhuthazwa yeminye yemizekelo esikubonise yona kwaye izixhobo esithe sabelana ngazo nawe ziyakuququzelela indlela osebenza ngayo. Faka umbala kwiqela lakho kwaye ulenze libe likhumbuleka kangangoko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » iilogo zeqela
imibono yelogo yokufota